यसरी मुक्त हुन सकिन्छ समायोजनको सकसबाट ! – Public Health Concern(PHC)
यसरी मुक्त हुन सकिन्छ समायोजनको सकसबाट !
स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यसलाई जनताको घरदैलोको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । जनताले पाउने अधिकांश सेवाको प्रवाह स्थानीय सरकारमार्फत नै हुने गर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालनको प्रमुख संयन्त्र भनेको यहाँको कर्मचारीतन्त्र हो । स्थानीय तहले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि त्यहाँको कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न सक्नु पर्दछ । कर्मचारीहरूको मनोबल जति उच्च भयो त्यति नै स्थानीय सरकारको दक्षतामा वृद्धि हुन पुग्दछ । तर समायोजन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मनोबल झन् घटाउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, स्थानीय तहमा कार्यरत सहायकस्तरको कर्मचारीहरूको हकमा निजामती सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको जस्तै मापदण्डको आधारमा र अधिकृत स्तर कर्मचारीको हकमा छैटौँ तहको अधिकृतलाई निजामती सेवाको शाखा अधिकृत सरह मानी सोही आधारमा समायोजन गरिनु पर्दछ ।सङ्घीय निजामती सेवामा पुराना स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई छड्के प्रवेशको लागि प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नपाउने गरी राख्न लागिएको प्रावधान हटाइनु पर्दछ ।
स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारी आफ्नो सेवाप्रति दक्षता हासिल गरिसकेका व्यक्ति हुने भएकाले प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख वा सचिव तहाँ कै कर्मचारी हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । राज्यले गर्ने व्यवहार न्यायिक हुनुपर्दछ, उसले गरेको व्यवहारमा कोही कसैले आवाज उठाउन सक्ने हुनुहुँदैन । माथि उल्लिखित कुराहरू न्यायिक ढङ्गले पुरा गर्न सकेको खण्डमा अहिले स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजनमा देखा परेको समस्या हट्ने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
श्रोत : प्रशासन डट्कम